Kooxdii Soomaalida ee xeegada oo mashxarad iyo sacabba-tun lagu soo dhoweeyey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Boqolaal isugu soo baxay fagaare ku yaal bartamaha Borlänge si ay ugu hambalyeeyaan kooxda xeegada ee soomaalida. Sawirle Stefan Ubbesen
Kooxdii Soomaalida ee xeegada oo mashxarad iyo sacabba-tun lagu soo dhoweeyey
La daabacay tisdag 4 februari 2014 kl 09.22
Magaalada Borlänge waxaa shalay fiidnimadii xaflad soodhoweyn iyo hambalyo ah loogu qabtay kooxda xeegada Soomaaliya oo fadhigoodu yahay magaaladaas, dhowaanna markii ugu horreysey taariikhda Soomaaliya ka soo qaybgalay cayaaraha adduunka ee xeegada oo lagu qabtay magaalada Irkutsk ee Ruushka.
Dhammaan cayaartoyda kooxda ayaa yimid fagaaraha Jussi Björlings Torg oo ku yaal bartamaha Borlänge, halkaas oo ay goobjoog ka ahaayeen labada shakhsi ee telefishanka caanka ku ah, Filip iyo Fredrik, oo filin ka sameynaya kooxda iyo dad kaloo badan oo halkaas isugu soo baxay si ay ugu hambalyeeyaan kooxdaas.
Sadiiq Kayse Axmed oo ka mid ah cayaartoyda kooxda ayaa telefishanka SVT Gävledala sidaan u sheegay:
- Waa wax aad loogu farxo si wanaagsan oo dadweynuhu noo soo dhoweeyeen. Aad ayaan uga helay.
- Sidee ayey ahayd inaad tagteen Saybeeriya?
- Waa wanaagsanayd. Ma aannaan fileyn inaan taageerayaal halkaas ka heleynno, laakiin dad badan ayaa na taageeray. Wuxuu ahaa dareen wanaagsan oo aanan halkaan ku sharrixi karin.
Jan Bohman oo ah hawlwadeen ka socda maamulka degmada Borlänge kana tirsan xisbiga Sooshiyaal-dimoqraadiga ayaa isaguna goobjoog ahaa. Wuxuu halkaas ka sheegay in kooxda xeegada ee soomaalidu ay qiime ballaaran ugu fadhido magaalada Borlänge, isagoo hadalkiisa sii wata:
- Waxaan aamminsanahay in kooxdu ay qiime weyn magaalada u leedahay. Waa marka koowaade waxay muujineysaa sida wanaagsan oo aan gacmaha isu haysanno oo aan wax wada qabsaneynno. Kulanka dhaqamaduna aad ayuu muhiim u yahay. Tan labaad cayaartoyda kooxdu waxay magaalada Borlänge ka dhigeen mid dunida caan ka noqotay, waana wax aan la heli karin.
Kooxdaan oo in ay xeegada cayaaraan bilaabay markii ugu horreysey dayrtii la soo dhaafay ayaa cayaarihii adduunka oo ay ka qaybgaleen ka dhaliyey laba gool, in kastoo cayaarihii ay qaybgaleen dhammaantoodba goolal badan looga badiyey.
Mashruucaan lagu asaasay kooxda xeegada Soomaaliya ayaa qayb ka ahayd barnaamij isdhexgal ah oo laga bilaabay magaalada Borlänge.
Isha: TT & SVT Gävledala